ချစ်ကြည်အေး: March 2010
မနေ့က ပထမနေ့ နေ့လည်စာ စားပြီးတဲ့အထိ ရောက်သွားပြီ ဆိုတော့ ဒီနေ့ တက္ကစီ နဲ့ ဈေးဝယ်တဲ့ အကြောင်းလေး ရေးမယ်။ နေ့လည်စာစားတဲ့ ဆိုင်က ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးက သဘောကောင်းပြီး ကျမ တို့နဲ့ စကားလေး ဘာလေး လာပြောတော့ ကျမတို့လည်း အကြီးဆုံးကုန်တိုက် ဂယ်လာရီယာကို သွားချင်လို့ ဒီကနေသွားရင် တက္ကစီခ ဘယ်လောက် ကျမလဲ မေးရင်း အကူအညီတောင်း ဖြစ်သွား တယ်။ ဒါနဲ့ သူက တက္ကစီ တစီးတား၊ ဘယ်ကိုပို့ပေးလိုက်ပါ ဘာညာပေါ့။ ရူးပြား ၃၀,၀၀၀ ကျမယ်တဲ့ ရတယ်လေ သွားကြမယ် ဆိုပြီး သိုင်းကျူးခဲ့ပါတယ်။
တက္ကစီသမားက စကားလုံးဝ မပြောဘူး ခပ်တည်တည် ပဲ။ မီးပွိုင့်ရောက်တော့ နောက်ဘက် ယူတန်း(U turn) ကွေ့ချလိုက်ပြီး ကုန်တိုက် ကြီးတခုရှေ့ရပ်ပေးတယ် ရောက်ပြီ ဆင်းတော့ တဲ့...။ ကျမက တက္ကစီပေါ်ကနေ မဆင်းသေးပဲ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကုန်တိုက်နာမည် က ခရစ်စနာတဲ့။ ဒါနဲ့ ကျမက ငါတို့သွားချင်တာ ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ သူက ငြင်းတယ် ဒါပဲ ဒါပဲ ဆင်းတော့တဲ့...စူပုပ်ပုပ်နဲ့ ဆိုတယ်။
အဲဒါကို ကျမရဲ့ လူကြီး Mr.Nice Guy က "ဆင်းလိုက်ပါချစ်ရယ် ကိုကိုတို့က ဘယ်ဈေးမှာ ဝယ်ဝယ်ရတာပဲဟာ" တဲ့။ သူက အဲလိုပဲ အမြဲတမ်း ရွှေပြည်အေးတရား ဟောတတ်တာ...သူ့တော့ အမေရိကန် နဲ့ အာဖဂန်ကြား ပို့ပစ်လိုက်ချင်တော့တယ်။
ကုန်တိုက်ထဲ ဝင်ဝင်ချင်း အရောင်းသမားတယောက်ကို ချက်ချင်းမေးတော့ ကျမထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ ကားသမား လူလည်ကျသွားတာ။ ကြည့်စမ်း...စလုံးကလူကို...လူတောင်မှ ရိုးရိုးလူ မှုတ်ဘူး ဘလော်ဂါကို...လူလည်ကျသွားတာ၊ ခုတော့ ဒီလူ ပိုစ့်ဖြစ်သွားရော...။
ပန်းချီကား ၃ကား ဝယ်တယ်၊ တီရှပ် အထည် ၂၀ ဝယ်တယ်။
ဈေးဝယ်ပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ ကုန်တိုက်ရှေ့မှာ တက္ကစီတစီး အဆင်သင့် တွေ့တာနဲ့ ငှားဖို့မေးကြည့်တော့ ကားသမားက သူ မုန့်လေး စားချင်လို့ ခဏစောင့်နိူင်မလားတဲ့၊ ကြည့်ရတာ ခုန ငနဲထက်တော့ ပိုပြီး မွန်မွန်ရည်ရည်ရှိတယ်။ ရပါတယ် စားပါဆိုပြီး ကျမတို့ သူ့စောင့်ရင်း ခုနက တက္ကစီအကြောင်း ကွန်ပလိန်း တက်မိတယ်။ သူက ရယ်ရင်း ဘာလီမှာ တက္ကစီ ကုမ္ပဏီ ၅ခုထက်မနဲ ရှိတဲ့ အနက် ဘလူးဘာ့ဒ် (Blue Bird) က စိတ်အချရဆုံးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောပြတယ်။
ဪ...သူကလည်း ကိုငှက်ပြာကိုး...ပြောပေမပေါ့။ ဒီရောက်မှ အင်တာနက်ထဲ ပြန်ရှာမိတော့ သူပြောတာ ဟုတ်သား...။ တခါတည်း ကြော်ငြာလိုက်မယ်..."ဘာလီသွားရင် တက္ကစီဆို ငှက်ပြာမှ စီးနော်"
ဒါက ကားသမား စားတဲ့ နေ့လည်ခင်း သရေစာ...Bakso လို့ခေါ်တယ်။ သူတို့ဆီမှာတော့ မနက်၊ နေ့လည် အဲဒါမျိုး အတော် စားကြတာ တွေ့မိတယ်၊ ပဲကြာဇံ၊ ပဲပြား၊ အာလူး၊ အမဲသားလုံး တွေထည့်၊ အမဲသားပြုတ်ရည်နဲ့ ကြာညို့၊ အချဉ်ရည်ထည့်ပြီး စားတယ်။ တပွဲကို ရူပြား ၁၀,၀၀၀...
ဒါကတော့ Bonus ပေါ့လေ...
ဒီနေ့ ညစာချက်စားဖြစ်လို့၊ ငါးကြင်းကို ချဉ်စော်ကားသီးနဲ့ အချဉ်ဆီပြန်လေးချက်၊ ခရမ်းသီးနှပ်၊ ဟင်းနုနွယ်ကြော်၊ ငါးပိလိမ္မာချက် နဲ့ ဘူးသီးပြုတ် တို့စရာ... ချဉ်စော်ကားသီး မမြင်ဘူးသူများ အတွက် အထုပ်နဲ့ ပန်းကန်လေးထဲမှာလည်း ထည့်ပြထားသေးတယ်...။
ပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးပေါ့လေ...ဟိုဘလော်ဂါ Bonus ထည့်ပေးတတ်တာကို အားကျလို့....။ သူလေ...ခုတလော သူ့ကိုယ်သူ သေကြောင်းကြံဖို့ ကြိုးစားနေသူ၊ ခုထိလည်း သေဖို့ နည်းလမ်းကောင်း မတွေ့သေးချင်ယောင် ဆောင်နေတဲ့သူ...
at March 31, 2010 23 comments: Links to this post
ဘယ်လိုစရေးရမလဲ...အင်း...မြန်မာလိုပဲ ရေးလိုက်ပါမယ်လေ...ဟိုနာမည်ကျော် ဆရာကြီး တယောက်လို ဆရာကြီးဦး X X X နိူင်ငံခြားမှ ပြန်ရောက်ပါပြီ မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ်၊ မိတ်တပတ်နွမ်းများ ပြန်လည် ဆက်သွယ်နိူင်ကြပါပြီခင်ဗျား လို့ စလိုက်ရင် ကောင်းမလား
လို့ အူတူတူတွေးမိသေး...ဟင်း ဟင်း...(ပါးစပ်ကို ညာလက်ဝါးလေးနှင့် အသာအုပ်၍ မပွင့်တပွင့် ဂျပန်စတိုင်လေး ရယ်၏)
၂၇ ရက်နေ့က သွားပြီးတော့ ၂၈ ရက်နေ့ မနက်ကနေ အရင် စလိုက်ပါမယ်။
ဒီပုံက ဟိုတယ်မှာ ကမ်းခြေဗြူး ဘက်လှည့်ပြီး မနက်စာ စားခဲ့တဲ့နေရာ။
အဲဒီကနေ ကမ်းခြေကို မခို့တရို့လေး ခုလို ချောင်းကြည့်လို့ရတယ်...။
မနက်စာ...စိတ်ဝင်စားဖို့ မကောင်းဘူး ၊ ပြီးတော့ ကမ်းခြေသွားဖို့ စိတ်စောနေလို့ ဗိုက်ထဲကို ပန်းကန်လိုက် မောင်းသွင်းပစ်လိုက်တယ်...ဓါတ်ပုံ မရိုက်လိုက်ရဘူးပေါ့...ကိစ္စမရှိပါ...နောက်နေ့တွေလည်း အတူတူပဲ မိနု(Menu) မပြောင်းပါ...နောက်တရက်မှ ကြည့်ကြပါကုန်....
ဆယ်ကျော်သက် လူရွယ်ကလေးများ အလွန် တက်ကြွတဲ့ ဘာလီ...
ဗူးသီး နဲ့ ဖရုံသီး လမ်းလျောက်လို့လာ....
(ဗူးလေးရာ ဖရုံဆင့် ဆိုတာ ဒါမျိုးများလား...)
အဲသလိုနဲ့ ညနေကို ရောက်သွားရော...ကြားထဲက အချိန်တွေလား...ဟင်း ဟင်း ဟိုတယ်မှာ အဝတ်အစား ပြန်လဲတယ်
ဆပါး (SPA) သွား၊ နေ့လည်စာ စားပေါ့...SPA သွားတဲ့ ပုံတွေ မရိုက်ခဲ့ရဘူး
တယောက်ကို ရူပြား ၃၀၀,၀၀၀ ပဲကျတယ် SPA က Couple Package ကို ယူလိုက်တာ...၁၀ရာခိုင်နှုန်းထပ်လျှော့တယ်....၃နာရီကြာ တယ် အရမ်းတန်လို့ ဘာလီသွားမဲ့သူတွေကို သွားဖြစ်အောင်သွားဖို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်...စလုံးမှာ ဒီဈေးနဲ့ မရလို့ပါ စလုံးနဲ့ ဘယ်လောက် ကျလဲ သိချင်ရင် ၆၄၀၀ နဲ့ စားကြည့်ပေါ့...
ဂျာဂူစီထဲ ဆင်းဆင်းချင်း ၂ယောက်သား တိုင်ပင်မထားပဲ ပြောဖြစ်တာက
"ဟေ့ ချူချူးမပေါက်ကြေး" :)
SPA ပြီးတော့ အတော်ကို ဆာကြပြီ...နေ့လည်စာကို အင်ဒိုစာ စစ်စစ် ဆိုင်ကလေးမှာ စားခဲ့တယ် ကျမက အသားနဲ့ ချိုချဉ်စပ်ကလေး...သူက ကြက်ထမင်းကြော်၊ အင်ဒိုဘီယာ၊ ကြက်ဥအောမလက် Seafoods နဲ့ ချဉ်စပ်ကြော်ကလေး...စားကောင်းသား...ကျမက ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဖျော်ရည်မှာသောက်တယ်
တဝက်လောက်သောက်ပြီး ရီတီတီနဲ့ ဟိုလူကြီး နှစ်ကိုယ်ခွဲ မဖြစ်ခင် ရပ်တန်းကရပ် ပစ်လိုက်တယ်၊ ထင်တော့ထင်သား...စသောက်ကတည်းက ခါးတားတားနဲ့လို့...။
ဟိုလူကြီးလက်ချက်နေမှာ တော်ပါသေး အဖေ့ ကျေးဇူးကြောင့် အယ်လကိုဟော
ရောထားရင် သိနေတာ...။ ဟင်းဟင်း...ဒါမျိုး မရဘူး... ဖြဲသီး ဖျော်ရည်တခွက်
နေ့လည်စာက ရူပြား ၁၇၀၅၀၀ ကျတယ်...ဒါလေးများ....ဟား...ဟား...
စားပြီးတော့ ရှော့ပင် သွားတာ တက်ကစီသမား တပတ်ရိုက်...ခံခဲ့ရတယ်...ရှက်လို့ ဘယ်သူ့ကမှပြောဝံ့ဘူး...ဘလော့ပေါ်ပဲတင်မယ် စိတ်ကူးတယ် တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပေါ့...
ခုတော့....ကျမရဲ့ တမတ်တန် ကင်မလာလေးနဲ့ပဲ ဘာလီရဲ့ တိမ်တွေကို အမိအရ ဖမ်းဆုတ် ရိုက်ခတ်ပစ်ခဲ့တယ်...
တိမ်တွေဟာ ခုတမျိုး ခုတမျိုးနဲ့ အတော် မျက်နှာများတယ်...
တမတ်တန် ကင်မလာ အစွမ်းကြောင့် တိမ်တွေဟာ ပြားတားတား...ခွင့်လွှတ်ပါ တိမ်တွေရယ်...
ပဲတွေက အမျိုးစုံ အတော်များသကိုး
လာ့ဂိတ်ရ်ှတွေကိုတောင် ရေမချိုးပေးရသေးဘူး ဒီတိုင်း တုံးလုံး...ပိုစ့်တင်ချင်လွန်းလို့ ပင်ပန်းနေတဲ့ကြားကနေ ရေးတင်ပစ်လိုက်တယ်...
ပိုစ့်ရှည်သွားမစိုးလို့ ဒီနေရာမှာပဲ ကတ်ကျေးကိုက်လိုက် ပါရစေ...
ဓါတ်ပုံကြည့်ချင်တယ်လို့ ပိတ်သတ်ထဲကနေ စာလေးတစောင် ကိုယ့်ဘာသာ ပစ်တင်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်ပုံကို တင်လိုက်ပါတယ်...ဒါ ရေမချိုးရသေးပါဘူး...ဟင်း ဟင်း ဟင်း....:) ည အိပ်ပျော်အောင် အိပ်ကြပါ...
at March 30, 2010 34 comments: Links to this post
ပြီးခဲ့တဲ့ နာတတ်စ် ထရယ်ဗယ်ဖဲ (Natas Travel Fair) မှာ ဘာလီကို သွားဖို့ တန်တာနဲ့ လက်မှတ် ဝယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ဖရီး အန် အီးဇီး(Free and Eazy) ပါ။ ခု အဲဒီ ခရီးသွားဖို့ ပစ္စည်းတွေကောက်ထည့်ရင်း ပိုစ့်တပုဒ် ကောက်ရေးလိုက် တယ်။ ယူသွားဖို့ ပစ္စည်းတွေက သိတ်မများလှပေမဲ့ ကမ်းခြေကို သွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဦးထုတ်၊ ဖလစ်ဖလောပ့် (Flip Flop)၊ ဆန်းန်ဘလောက် (Sun Block) နဲ့ နေကာမျက်မှန်တွေက မပါမဖြစ် ယူသွားရမှာတွေ၊ အရေးကြီးတဲ့ လေယာဉ် လက်မှတ်၊ ဟိုတယ်ရီဇာ့ဗေးရှင်း၊ ပတ်စ်ပို့တွေလည်း လွယ်သွားမဲ့ ကျောပိုးအိတ် ထဲ ထည့်ပြီးသား။ အဲ အစာကြေဆေး ဆင်တုန်းမနွယ် မေ့တော့ မလို့...အပီ ဝါးဒီးဆွဲမှာ ဆိုတော့ကာ စားသမျှ အစာကြေဖို့ လိုသမို့ လား...၊ ဒီအချိန်မှာ ဝိတ်အကြောင်း ခေါင်းထဲက ခဏ ထုတ်ထားတယ်...။ ပြီးတော့ ရှမ်းဆေး အဖြေကျော်...သိတ်ကောင်းတဲ့ ဆေး...ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒါသောက် ...ပျောက်ပဲ။ ခေါင်းကိုက်တတ်လို့ ပနဒေါ တကဒ်လည်း ပါသေး။ တော်လောက်ပါပြီလေ ဆေးက ဒီလောက်ပါပဲ...။
နားကလော်ဖို့ ကော်တွန်ဘတ်ဒ်လေး တွေလည်းယူသွားအုံးမှ...ရေထဲဆင်းပြီးရင် နားယားတတ်တယ် မဟုတ်လား...။ ရေကူးဖို့က သူ့အတွက် ရေကူးဘောင်းဘီ ထည့်ပြီးသား။ ကျမ အတွက်ရေထဲ ဆင်းဖို့ရော.....? စဉ်းစားရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်က ထိုင်းမှာ ဝယ်ခဲ့တဲ့ တူးပိစ်လေး သတိတရ နဲ့ ဘီရိုထဲကို ဖွပြီး ရှာထုပ်လိုက်သေးတယ်။ လားလား...တူးပိစ်လေးက လှတုန်းပဲ...ဝလာတာက ကိုယ်...။ မဖြစ်သေးပါဘူးလေ...ကမ်းခြေလာသူ အပေါင်း ဝက်သား ပြတ်ရော့လဟယ် ဆိုသလိုများ ဖြစ်နေမလား...အသာလေး ပြန်သိမ်း ထားလိုက်တယ်...ရာဇဝင်ထဲမှာ...အဲ ဘီရိုထဲမှာပဲ တူးပိစ်ကို ထားရစ်ခဲ့...ခဲ့...ခဲ့...။
အိမ်ကလူကြီးကတော့ ဒီနေ့ အလုပ်နေ့ဝက် သွားရသေးတယ်။ အို ... သူက ကျမထက် ပိုတက်ကြွသေး....လိန်ပျံတွေကို သူချစ်တယ် လိန်ပျံကွင်းကို သူချစ်တယ်၊ သွားဖို့ တကြွကြွ ဖြစ်နေတာများ ...မြင်စမ်းစေချင်တယ်။ သူနဲ့ လိန်ပျံကွင်းနဲ့ ချစ်ကျွမ်းတဝင် ဖြစ်နေခဲ့တာ များ ကြာလှပေါ့။ ပြောရမယ်ဆို ကျမနဲ့ အိမ်ထောင် မကျခင် ကတည်းကတဲ့...သူ့ အချစ်ဦး ဆိုပါတော့။ အေးလေ ဒီတခေါက် လိန်ပျံကွင်း ရောက်ရင် သူတို့ကို ပေးစားခဲ့လိုက်ပါ့မယ်...ပြန်ပေါင်းထုပ်ကြပါစေတော့....အဲသလို ကျမက သဘောထား ကြီးပါတယ်။
ဘာလီမှာ တရက်ခရီးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ နေရာတွေ ချည်းပဲမို့ သွားဖြစ်အောင် သွားအုံးမှာ။ ဘာလီရဲ့ မိုးလေဝသ အခြေအနေ ဖတ်ကြည့်တော့ ဒီစနေ-တနင်္ဂနွေ ခြောက်သွေ့မှာ တဲ့လေ တော်ပါသေး။ ဖတ်မိသမျှ ဘာလီ အကြောင်းတွေက စိတ်ဝင်စား စရာတွေချည်းပဲ။ ဘာလီရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို နဲနဲလေး ပြောပြချင်တယ်...သူ့ရဲ့နောက်ခံက အရောင်အ သွေး စုံလွန်းတာမို့လို့...။
ဘီစီ ၂၅၀၀ လောက်က တရုတ်လူမျိုးတွေ ဘာလီမှာ စတင် အခြေချခဲ့ကြပြီး စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံတဲ့ အင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့ ဘဝတွေနဲ့ စခဲ့ကြသတဲ့။ နောက်တော့ ဘာလီယဉ်ကျေးမှု ရယ်လို့ ပေါ်ထွန်းလာ ပြီး တရုတ်လူမျိုး တွေကပဲ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေး နည်းနာတွေ တွေ့ရှိ သုံးစွဲခဲ့ကြ ပြန်တယ်။ အေဒီ ၁၀၁၀ရောက်တော့ ဘာလီရဲ့ အိမ်ရှေ့မင်းသား Airlangha ဟာ အရှေ့ ဂျာဗားကို သိမ်းပိုက် အောင်မြင်ပြီး ဘာလီနဲ့ ပေါင်းစည်း၊ ပြီးတော့ ဘာလီကို သူ့ညီအကိုတော် Anak Wungsu ကို ပေးသနားလို့ မင်းလုပ် အုပ်ချုပ်စေခဲ့တယ်။ အဲဒါဟာ သူတို့ သမိုင်းမှာတော့ သိတ်အရေးပါတဲ့ ရွှေ့ကွက်လေး တခုပဲလို့ ကျမ မြင်မိတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း အဲဒီပေါင်းစည်း မှုဟာ ဘာလီ နဲ့ ဂျာဗား အကြား နိူင်ငံရေးရာ၊ ဂီတနဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေ ကူးလူးဖလှယ်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တာ။ အခုတိုင် ပြောနေ ကြားနေကြရတဲ့ ဂျာဗား ဘာသာစကား ကာဝိုင် (Kawai) ဆိုတာ အဲဒီအချိန်မှာ ပေါ်လာပြီ။
ယဉ်ကျေးမှုတွေ ဖလှယ်လို့ ကုန်သွယ်ရေးတွေ တိုးတက် စည်ပင်လာတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဒေသတခုကို အုပ်ချုပ်ချင်၊ လိုချင်သူတွေ ရှိလာတဲ့ အလျောက် ဟင်ဒူ ဂျာဗားဗိုလ်ချုပ်ကြီး Gajah Mada က ၁၃၄၃ မှာ ဘာလီကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တော့ တယ် ။ အေးလေ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုတော့ လည်း မျက်စိကျရာ အပိုင်းကို အလွယ်တကူ သိမ်းနိူင်ပေမပေါ့... ။ အဲဒါဟာလည်း ဘာလီမှာ ဟင်ဒီတွေရဲ့ အိန္ဒိယ အငွေ့အသက်တွေ ကျန်နေခဲ့မှုရဲ့ အကြောင်းရင်းတခုပဲ ဖြစ်တယ်။
ဘာလီ အသိမ်းခံရသလိုပဲ တဖက်မှာလည်း ဂျာဗား ထဲကို ၁၆ ရာစု နှစ်မှာ အစ္စလာမ်တွေ အရှေ့ စူမတ်တြားဘက်ကနေ ပြန့်နှံ့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြန် တယ်။ ဒီတော့ ဘာလီဘုရင် ရဲ့ လက်အောက်မှာ တပေါင်းတည်းဖြစ်နေတဲ့ ဂျာဗား နဲ့ ဘာလီဟာ ဟင်ဒီတွေ၊ အစ္စလာမ်တွေ ဝင်ရောက်လာပြီး တဲ့နောက်မှာ လူမျိုး၊ ဘာသာ ကွဲပေါ် မူတည်လို့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစ ကား၊ ဂီတနဲ့ အနုပညာတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရောင်တွေ စုံလာတယ်။ တခါ ၁၅၉၇ မှာ ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတွေ ဂျာဗားကျွန်းပေါ် ရောက်လာခဲ့ပြီး ဥရောပ ယဉ်ကျေးမှုတွေ စိမ့်ဝင်ခဲ့ ပြန်သေးတယ်။
ဒီတော့ အဲသလို အရောင်တွေ စုံလင်၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ ရက်ယှယ်နေတဲ့ သမိုင်းနောက်ခံတွေနဲ့ ဘာလီကို ကျမ စိတ်ဝင်စားစွာ ရွေးချယ်ခဲ့တာ...ကျမမမှားပါဘူးနော်...
အဲ...နာတတ်စ် (Natas) ရဲ့ ပရိုမိုးရှင်း စွဲဆောင်မှု ကောင်းတာလည်း ပါသပေါ့လေ...​‌​
အားလုံးလည်း အဆင်သင့်သလောက် ဖြစ်နေပါပြီ...ဒီစနေ သွားပြီး အင်္ဂါနေ့ ပြန်လာပါမယ်...အဲဒီတော့မှ အတွေ့အကြုံတွေ ဖောက်သည်ချပါအုံးမယ်...
ပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်...(ကျမတို့ နှစ်ယောက် ကိုပြောပါတယ်....:))
သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဘလော့ဂ်ရေးဖော်တွေ၊ စာဖတ်သူတွေ အားလုံးအတွက်လည်း ဆုအကြီးကြီး တောင်းပေးခဲ့ပါတယ် နော်...အစစ အဆင်ပြေပါစေ...ကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဂင်းနိူင်၊ ဖတ်နိူင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းရင်း " အင်ဒိုနီးရှား ပိုလာဘာလီကျွန်းလေးဝယ် သူနဲ့လည်း တွေ့လို့ ချစ်ကြိုးသွယ်" ဆိုတဲ့ အန်တီ ဖြူသီရဲ့ သီချင်းလေး ဆိုပြရင်း အဆုံးသတ်လိုက် ပါတယ်....(ဟင် ဘာမှလည်းဆိုင် ဘူး:::))
အမှန်ကတော့ ကျမက လက်ပ်တော့လေး သယ်သွားချင်တာ...တနေ့လည်ပြီးတိုင်း ပို့စ်တပုဒ် တင်ချင်လို့...အိမ်ကလူကြီးရဲ့ ဘာ....ဆိုတဲ့ အသံကြီးအောက်မှာ...ဟမ် သူများက ဘာများပြောမိလို့လဲ... လို့ ..မျက်လုံးလေး ကလယ် ကလယ် နဲ့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်လိုက်ရတယ်...အို...မြန်မာပြည်သူပဲ ရူးချင်ယောင်ဆောင်တာ ခက်မှတ်လို့....
at March 27, 2010 25 comments: Links to this post
at March 25, 2010 44 comments: Links to this post
at March 23, 2010 20 comments: Links to this post
at March 22, 2010 17 comments: Links to this post
at March 16, 2010 27 comments: Links to this post
at March 14, 2010 32 comments: Links to this post
ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်တုန်းက ဟင်းလေးတခွက် ချက် တင်မိပါတယ် အမျိုးတော်ချင်သူတွေ အတော်များများ ထွက်လာလိုက်ကြတာ...၊ ဟင်းချက် ကောင်းမှာပဲလို့ ချီးကျူးသူ တွေကလည်းများ ဆိုတော့ကာ ကျမဖြင့် ဘဝင်လေဟပ် သလိုလိုတောင် ဖြစ်သွားတယ်။ သို့သော်လည်းပေါ့ လေ အဲသလို မဟုတ်တာများ အချီးကျူးခံရရင် လူက နေကို မနေတတ် တာ ။ ဒါနဲ့ပဲ ကိုင်း အထုပ်တော့ ဖြည်ပြအုံးမှ ဖြစ်တော့မယ် ဆိုပြီး ဒီပို့စ်ကို ရေးလိုက်တယ်။ အမျိုးတော်ချင်သူများ၊ လျှောက်လွှာ တင်ထားသူများ ပြန်လည် စဉ်းစားခွင့် ရအောင်ပါ...။
အရင်တုန်းက ကျမ "မချက်ချင်" ဟာ ခုတော့ ဟင်းချက်ဖို့ အမြဲ စိတ်မပါတော့ဘူး။ အို အပြင်မှာ သွားစားတာက ပိုတန်တာ၊ လင်မယား ၂ယောက် စားမှ အအေးနဲ့ ဘာနဲ့ဆို S$ ၁၂ / ၁၃ ဒေါ်လာဆို စားပါလေ့၊ ဟော ပန်းကန်တောင် ဆေးစရာ မလိုဘူး လို့ အားတက်သရော ပြောတတ်ပြီ။ ဒါကိုမှ "ကြက်သား နဲ့ ဗူးသီး အိမ်ချက်လေး စားချင်တာကွ" ဆိုလာရင်တော့...အင်း ရတယ်လေ ဈေးအမြန်သွား ဗူးသီး နဲ့ ကြက်သား ကြက်ရိုး သပြွမ်းဟင်းတခွက် တပတ်စာ ချက်ပေးလိုက်တယ် စားပေရော့ပဲ။ အမယ် စိတ်ပါရင်ဖြင့် ဒေါ်ရွှေမိုး ရယ်ဒီမိတ် ငပိ ထောင်းလေးထဲ သံပုရာသီးလေးတောင် ညှစ်ထည့်ပေး လိုက်သေးတာ။ အဲဒီလို မသိုးဟင်း တပတ်စာ နဲ့ လွှတ်ထားလိုက်တာ သူ့ခမျာ နောက်ထပ် ကြက်သား ဗူးသီး ဆို စိတ်နာသွားရော။ အဲသလို....။
ညဆိုလည်း ညမို့ သူ့မှာ ကောင်းကောင်း မအိပ်ရရှာပါဘူး။ တခါတလေ တနေ့လည်လုံး စဉ်းစား မရတဲ့ ကဗျာ ကာရန် နဲ့ စာလုံးတွေက တရေးနိူးမှ စိတ်ထဲ ဒိုင်းကနဲ ပေါ်လာတော့ ကျမက မေ့တတ်သူ မို့လို့ ဝုန်းကနဲ ချက်ချင်းထရင်း မီးဖွင့်ပြီး စာတရွက်မှာ ကောက်ခြစ်ထား လိုက်ရော၊ ပြီးမှ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံး နဲ့ ပြန်လှဲအိပ်တာ။ သူက ဘာဖြစ်တာ ပါလိမ့်လို့ မျက်မှောင်ချီ ကြည့်ရင်း အခြေအနေကို သဘော ပေါက် သွားသလိုနဲ့ စောင်ကြီးကို မျက်နှာပေါ်ထိ ဆွဲအုပ်၊ စိတ်ထဲကလည်း ဂေါက်မ၊ ငကြောင် လို့ ကျိန်ဆဲရင်း ပြန်အိပ်သွားပါရော။ အဲသလို....။
ကျမရှေ့ဆို သူ့ခမျာ အပြောအဆိုက အစ အတော်လေး ဆင်ခြင်ရရှာတယ်။ သူ ပြောသမျှ ပို့စ် ဖြစ်သွားတတ်လွန်းလို့ မသက်ဝေ တို့ဆို သူပြောတာတွေ အိမ်လာနားထောင်မယ်ချည်း လုပ်နေတာ၊ စဉ်းတော့ စဉ်းစားရမယ်လေ စီးပွားရေး အခြေအနေ အရပေါ့၊ ကုန်ကြမ်းရ မယ် လာနားထောင်ကြ ဆိုပြီး ပါမိနစ် (per minute) နဲ့ ချာ့ခ်ျ (charge) လုပ်ရင် ကောင်းမလားပဲ။ သူကပြောလာတယ် ကျမရှေ့ ယောင်လို့တောင် လေမလည်ရဲဘူးတဲ့ ကဗျာ ဖြစ်သွားမစိုးလို့... အဲသလို....။
တပတ် တပတ် အဝတ်တွေဆိုတာကလည်း များလိုက်တာ။ လျှော်ရတာ စက်နဲ့ပေမဲ့ မီးပူတိုက်တော့ လက်နဲ့ မဟုတ်လား။ မအားလို့ မတိုက်ဖြစ်သေးရင် အဝတ်တွေအကုန် ခေါက်ပြီး သူ့ပုဆိုး တထည်ထဲ ထည့်၊ အထုပ် ထုပ်ပြီး ဘီရိုထဲ ပစ်ထဲ့ထားလိုက်တာပဲ။ ၂ပတ် လောက် ဆက်တိုက် မီးပူမတိုက်ဖြစ်လို့ကတော့ ဘီရိုဖွင့်ရင် သတိသာထား ပေတော့ပဲ။ လူပေါ် ပြိုကျလာတတ်လို့ ။ အဲဒါနဲ့ မဖြစ်သေးပါ ဘူး အပြင်ထုတ်ထားမှပါ၊ တွေ့မှ လုပ်ဖြစ်မှာကိုး ၊ တခါ ဘီရိုထဲက အထုပ်တွေ အပြင်မှာပဲ ချထားပြီး တော်တော်နဲ့ မတိုက်ဖြစ်ပြန်တော့ ဘေးဘီဝဲယာမှာ အထုပ်တွေ ဝိုင်းလို့။ ဒါတောင် ကျမက စာရေးချင် တဲ့ အခါ အဝတ်ထုပ်ကြီးတွေကို ကျော် ကျော် ပြီးကြည့်တတ် တာ "ဘာမှ လုပ်စရာ မရှိရင် ချစ် စာရေးအုံးမယ်နော်" လို့ သူ့ကို မျက်နှာချိုသွေးရင်း အဝတ်ထုပ်ကြီးတွေကို ကျောပေးပြီး လက်ပ်တော့ ထဲ ခေါင်းဝင်တော့မတတ် စာရေးစာဖတ် လုပ်တော့တာ။ အဲသလို....။
အိမ်မှာ အဲသလို အဝတ်တွေ၊ သတင်းစာတွေ၊ စာအုပ် နဲ့ စာရွက် အကြမ်းတွေ ရှုပ်ပွလို့ ဒါကိုပဲ ကျမ မသိချင်ယောင်ဆောင်လို့ စာတွေရေး နေတဲ့ အခါ ဒေါ်ချစ်ကြည် အမှိုက်ပုံထဲများ ထိုင်နေသလား လို့မေးတတ်တယ်။ ကျမကလည်းကျမ၊ ရှက်ရှက် နဲ့ပဲ သူပြောသလို အဓိပ္ပါယ် နဲ့ ကလောင် နာမည်လေးများ ပြောင်းမလားလို့။
ချစ်ကြည်အေး(အလုံ) ဆိုရင် ဘယ့်နှယ်တုန်း...ဒါမှမဟုတ် ချစ်ကြည်အေး (ပုဇွန်တောင်) ဆိုရင်ရော...။ အဲ ခက်တာက အလုံ အမှိုက်ပုံ နဲ့ ပုဇွန်တောင် အမှိုက်ပုံ ဘယ်သင်းက ပိုကြီးမှန်း မသိတာ...။ အဲ ပိုကြီးတဲ့ ကောင်သာ နောက်မှာ တပ်လိုက်ပါတော့လေ....။
at March 11, 2010 30 comments: Links to this post
လမိုက်ည ဆိုရင်တောင် ညရဲ့ အမှောင်ကို မတွေ့ထိ နိူင်လောက်အောင်
မှောင်နေတဲ့ အမှောင်တခု ပဲ တိတိကျကျ ရှိနေတယ်....
ငါ ဘယ်မှာလဲ အဖြေမရှာနဲ့ ပစ္စုပ္ပါန်တောင်မှ မရေမရာ
သွားရတော့မယ် ဆိုပြီး တုန်လှုပ် ငိုငြီးမနေနဲ့....တုန်လှုပ်တဲ့ စိတ်ကို မှတ်.....
ဘာ တွေကိုများ တမက် တမော ဖွေရှာနေအုံးမှာလဲ......။
မှတ်ရင်း နဲ့ ပဲသွား သွားရင်း နဲ့ ပဲမှတ်....
လင်းဖို့ အချိန် တချိန်ဟာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ရောက်လာတော့မှာ....
** နောက် ခန္ဓာ ရရှိအုံးမဲ့ ပုထုဇဉ် တယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်ကို မမီမကမ်း ခံစားရေးဖွဲ့ ပါတယ်...
at March 09, 2010 16 comments: Links to this post
at March 07, 2010 23 comments: Links to this post
အဲသလိုနဲ့ တနေ့ တနေ့ ချစ်သောသူ အကြိုက် မမောမပန်း ချက်ပြုတ်လာလိုက်တာ ကျမဖြင့် ထန်းပင်ပေါ်က ဆင်းရတယ်လို့ကို မရှိ တော့ဘူး။ ဂျပန်ခေတ် ထန်းတက်လက် မှတ် ရထား သူများလိုပေါ့ရှင်။ အဲ တနေ့တော့ အိမ်မှာ သူ မူးလဲမလို ဖြစ်တာနဲ့ လင်မ ယားနှစ် ယောက်သား အိမ်အောက်ထပ် ဆေးခန်းကို ပြေး၊ သွေးစစ်လိုက်တော့မှ သူ ကိုလက်စထရောတွေ များနေ သတဲ့။ ဆရာဝန်က ဆေး ၃လ သောက်ပြီး သွေးပြန်စစ်ဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ကိုသာ ပြန်ရောက်ရော ကျမဖြင့် အတွေးတွေနဲ့ ပတ်ချာလည်နေတော့တာ။ သူသာ ခုနေ တခုခု ဖြစ်ရင်တော့ ငါ တရားခံ လို့ စိတ်ထဲ တွေးမိရတာ ကိုး။ တွေးဆို တွေးမိရဖို့ အကြောင်း ကလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိနေလေရဲ့။ အရင် အိမ်မှာ ကျမတို့နဲ့ အတူနေခဲ့ဖူးတဲ့ အမကြီး တယောက်ရှိတယ်။ သူက အပျိုကြီး၊ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းပီပီ အစားအသောက် က အစ ဆေးဝါးအဆုံး သိတ်ဂရုစိုက်တယ်။ သူစားတာ ကြည့်လိုက်ရင် ရေလုံပြုတ် လို ဟာမျိုး တွေ ချည့်ပဲ။ ကျမမို့လို့ ဟင်းချက်ပြီဆို ဘေးနားလာပြီး "ယောင်္ကျား ကို အင်စတောလ်မန့် နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း သတ်နေတယ်ပေါ့လေ" လို့ ပြောတတ်တာ။
ဒီတော့ ကျမမှာ ဘုရား ဘုရား မှန်များ မှန်နေပြီလား ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းလိုက်ရတာ။ အဲဒီ့ တနေ့လုံး ဇီးရွက်လောက် မျက်နှာနဲ့ တချိန်လုံး သူ့ အရိပ်အကဲပဲ ကြည့်နေမိတော့တယ်။ ဟို အပျိုကြီး ပြောခဲ့တဲ့ စကား ခဏခဏ နားထဲ ကြားရင်း စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ရတာ များလေ။ တော်နေကြာ ဇနီးဖြစ်သူ မဆင်မခြင် ချက်ကျွေး၍ ခင်ပွန်း ခမျာ မာလကာသီး စားရခြင်း ဆိုပြီး စာလုံးမဲကြီးနဲ့ မျက်နှာဖုံးမှာ ပါလာလို့ ကမှ မတင့်တယ်။ ခက်လိုက်ထာများ...။
မောင်မင်းကြီးသား ကံကြီးပေလို့ ဆေးသောက်ပြီး ၃လ သွေးပြန်အစစ်မှာ သူ့အခြေအနေက ပုံမှန်ထဲ ပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် တော့ ကျမ လည်း အချစ် ကျန်းမာရေး အတွက် ဟင်းချက်ခြင်း အနုပညာသစ် တခု ဆည်းပူး ရပြန်တာပေါ့လေ။ ဝက်သားဝယ်ရင် အဆီ နဲတဲ့ အပိုင်းရွေး ဝယ်တတ် ခဲ့ပြီ။ တပတ်ကို တရက် နှစ်ရက်ပဲ ထမင်းဝိုင်းမှာ ဝက် မျက်နှာမြင်ရမယ်။ ဟင်းထဲကို အရွက်စိမ်း နဲ့ ခရမ်းချဉ် သီး များများ ထည့်ချက်တတ်ပြီ။ ချည်ရည်ဟင်းထက် အဖြူထည်ဟင်းချို၊ အသားပြုတ်ရည်ထဲ ပြောင်းဖူး၊အာလူး နဲ့ မုန်လာဥနီ ထည့် ထားတာမျိုး လေးတွေ အချက်များလာခဲ့ရတယ်။ ကျန်းမာမှ ချမ်းသာမယ်၊ "You are what you eat" ဆိုတဲ့ စကားကို ကျမ လုံးဝဥဿုံ ယုံကြည် သွားခဲ့ရတယ်။
အသေအချာ စဉ်းစားကြည့်ပြန်တော့ အမျိုးသားတွေ ခင်ပွန်းသည် ဖြစ်လာဖို့ အတွက် သူတို့အမေ ရင်ခွင်ထဲကနေ ကျမတို့က ဆွဲထုတ် ယူထားခဲ့တာ မဟုတ်ပါလား။ အမေတွေရဲ့ လက်ထဲမှာတော့ သူတို့ရဲ့ နေထိုင် စားသောက်ရေးဟာ အင်မတန် လုံခြုံစိတ်ချစွာ ရှိခဲ့ကြ မှာပါ။ အမေတွေဟာ သားကလေးတွေ မျက်နှာကို မှန်လိုလည်း​‌​ အရိပ်ကြည့် နေခဲ့ကြပါ လိမ့်မယ်။
အဲဒီလို အမေတွေ ဆီကနေ လက်ပြောင်းရယူထားတဲ့ ကျမတို့ တတွေဟာ မိခင် မျိုးနွယ်တွေ ဖြစ်တဲ့ အလျောက် မိခင်စိတ် ဆိုတဲ့ မေတ္တာဓါတ်ခံက မွေးရာပါ ကိန်းပြီးသားပဲ မဟုတ်လား။ သားသမီးရှိသူများ ဆိုရင်ဖြင့် ပြောဖွယ် မရှိတော့ပါဘူး။ သားကိုသခင် လင်ကို ဘုရား ဆိုတာ ကျမတို့ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ ယနေ့ထိ လက်ခံ ကျင့်သုံးနေဆဲပဲလေ။ သားကလေး မျက်နှာ ကြည့်မဝ၊ ခင်ပွန်း မျက်နှာ ကိုလည်း ကြည့်ရနဲ့ သူတို့လေးတွေ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်နေရင်ပဲ ကျမတို့ရဲ့ ကမ္ဘာငယ်လေးဟာ လှပမြဲ၊ စိုပြည်မြဲ ဖြစ်နေရပြန်တာ။
တခါတလေတော့လည်း ကလေး မရှိတဲ့ ကျမ အတွက် သူဟာ သားတယောက် ဖြစ်နေခဲ့ ပြန်ပါရဲ့။ နေကောင်းရဲ့လား၊ ခေါင်းရော ကြည် လား၊နေ့လည်က ရုံးမှာ ထမင်းစား ကောင်းရဲ့လား၊ ဘာဟင်း နဲ့ စားလဲ၊ ဝမ်းရော မှန်လား ? ဒါ သူ အိမ်ပြန်ရောက် တိုင်း တနေ့ တနေ့ မေးဖြစ်နေတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ သူက ပြန်နောက် တယ်။ ဒီနေ့ အီအီး ဘယ်နှစ်တုံးပါလဲ အပျော့ အမာရော ပြောပြရအုံးမလား တဲ့လေ။
သူ အလုပ်ထဲမှာရော ပျော်ရဲ့လား ဆိုတာလည်း မေးရ သေးတာ။ တကယ်ဆို အိမ်မှာထက် ရုံးမှာ နေရတဲ့ အချိန်က ပိုများလေတော့ အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ဖိစီးမှုရှိနေရင် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိူင်တယ် မဟုတ် လား။ ဒါကြောင့် သူ့ အလုပ်ထဲမှာ သူ့ကို ပျော်နေစေချင်တယ်။
ပြောချင်တာက ကျမတို့တတွေ မိသားစုကို ချစ်တာ ချစ်ကြပါ။ ဒါပေမဲ့ အလိုလိုက်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်လျော်တာတွေ မကျွေးမိ စေဖို့ပါ။ အထူးသဖြင့် Junk Foods နဲ့ Deep Fried တွေ သိပ်မကျွေးကြစေချင်ပါဘူး။ မိသားစုတစုလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဟာ ကျမတို့ အမျိုးသမီးတွေ လက်ထဲမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို အမြဲ သတိရနေဖို့ပါပဲ။
ခုတော့ဖြင့် သူဟာ ကျမ လက်ထဲမှာ ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာစွာ ရှိနေရှာလေရဲ့။
မိသားစုတိုင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘဝလေးများ ပိုင်ဆိုင်နိူင်ကြပါစေ...
at March 05, 2010 29 comments: Links to this post
ကျမကို သူ စတွေ့ခဲ့တာ ဆရာတော်ကျောင်းမှာ ဆွမ်းကပ်ဖို့ ဝိုင်းကူ ချက်ပြုတ်နေချိန်ပါ။ ကျမကဖြင့် မအားတာမို့ သူ ကြည့်နေ ခဲ့တယ်ဆိုတာ လုံးဝ သတိမထားခဲ့မိဘူး။ အင်္ကျီပွပွ ဝတ်ထားခဲ့လို့ ဘယ်ဘက် လက်နဲ့ နောက်ပြန် အင်္ကျီစတွေကို လုံးပြီး ဆုတ် ကိုင်ထားရင်း ညာဘက်လက်ကလည်း ဟင်းအိုးမွှေနေတဲ့ ကျမကို တွေ့စကတည်းက သူ့ရင်တွေ လှုပ်ကနဲ ဖြစ်သွားခဲ့ရတာ လို့ နောက်တော့ သူ ပြန်ပြောပြ ခဲ့တယ်။
နောက်ရက်တွေမှာလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်း လာတိုင်း သတ္တိခဲကြီး သူက ကျမကို ချောင်းကြည့်ပြုံးပြန် အဆင့်က တော်တော်နဲ့ တက်မလာခဲ့ပါဘူး။ လပေါင်း တော်တော်ကြာမှ တဆင့်ခံနဲ့ ကျမ ကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း ပြောခဲ့တယ်။ ကျမမှာ နဲနဲမှ ထင်မထား လို့ အံ့ဩလိုက်ရတာ။
သူက အစားကောင်း မက်သူမို့ ငယ်ငယ်လေးတည်းက အိမ်မှာ ထမင်းစားရင် အသားဟင်းပါမှ၊ အသားတောင် ဝက်သားမှ၊ ဝက်မြင်ရင် ခေါင်းကိုက်သူ၊ ခေါင်းက စပြီး ကိုက်လိုက်တာ အမြီးထိပဲ ဆိုပါ တော့။ ချစ်သောသူက အဲဒီလောက် ဝက်သား ကြိုက်တော့ကာ ကျမမှာ ဝက်သားချက်နည်း ပေါင်းစုံကို အရည်ကျို သောက်ရပါ တော့တယ်။
ဝက်သား အချိုချက်လေး ရိုက်ပြီးသား ရှိနေလို့ ဖြည့်တင်ပေးလိုက်တယ်...
သကြားလေး ဆီသပ်၊ မွှေးလာမှ ဂျင်းအချောင်းလေးတွေ ထည့်၊ ဂျင်းနံ့လေးမွှေးတော့မှ အသားထည့်၊ အသားနူးတော့ ကြက်သွန် နီ လေးစိတ်ကွဲ လေးထည့်၊ ချကာနီးမှ ပဲငံပြာရည် အပျစ်လေး အရောင်လှရုံ ထည့်တဲ့ အချိုချက်ဟင်း၊ အဲဒီ ဝက်သား အချိုချက် ကို ပဲပြား၊ မှို၊ မှိုခြောက်ပန်းခြောက်၊ ပဲလိပ် ထည့်ချက်တဲ့ တရုပ်ဟင်းမျိုးလည်း သူ ကြိုက်တယ်။ ဝက်သားကို ကြက်သွန်ဖြူ နီ ငရုတ်သီးနဲ့ ဆီသပ်၊ အသားနူးအိလို့ ချကာနီးမှ မန်ကျည်းသီး မှည့် ပျစ်ပျစ်လေး ဖျော်ထည့်တဲ့ဟင်းလည်း အအီပြေလေးမို့ စား ကောင်းပြန်တာပဲ။
ကြက်သွန်ဖြူ နီ ဂျင်း ထောင်းပြီးသားနဲ့ အသားကို တခါတည်းရောနယ်၊ တနာရီလောက် ထားပြီးမှ သကြားနဲနဲ၊ ပဲငံပြာရည် အကြည်ရည်ထည့်ပြီး လုံးချက်၊ အသားသိတ်မနူးခင် ကြက်သွန်နီကြော် မွမွလေး ကို ခြေပြီးထည့်တဲ့ ဝက်သား အိုးကြီးနှပ် ကလည်း သူ့အကြိုက်ပါပဲ။ ဝက်သားကို အပြား သေးသေးတုံး၊ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီသပ်ပြီး အသားနူးတာနဲ့ ကြက်သွန်နီ လေး ထောင့်အတုံး၊ ခရမ်းချဉ်သီး လေးထောင့်အတုံး၊ ပန်းငရုတ်ပွသီး အစိမ်း နဲ့ သီဟိုဋ္ဌ်စေ့ ထည့်ချက်တဲ့ ဝက်ကုန်းဘောင် ဆိုလည်း မြန်လဲမြန် သူလည်းကြိုက်တာမို့ မကြာမကြာ ချက်ဖြစ်တယ်။
ဝက်သားကို အပြားပါးပါးလှီး ၊ မုန်ညှင်းဖူး စိမ်းစိမ်း ကို အဖပ်လိုက် ၃ပိုင်းပိုင်း၊ ဆီ နဲနဲထည့်၊ ခရုဆီလေးနဲ့ ကြော်၊ ချခါနီးမှ ငရုတ်ကောင်းနဲ့ ကြက်သွန် ဖြူ ဒါးပြားရိုက်ပြီးထည့်ချက်ရတဲ့ အရည်စပ်စပ်လေး သောက် စားလို့ရတဲ့ ဟင်းလေးလည်း သူ့အ ကြိုက်ပါပဲ။ ဘာဂူတေး လို့ခေါ်တဲ့ ဝက်နံရိုးဆေးပေါင်း ဟင်း ဆိုရင်တော့ ကျမတို့ ၂ယောက်လုံး အကြိုက်ပေါ့။
သူ့အမေ ကျမ ယောက္ခမကြီးက ပူပန်ရှာတယ် ဟင်းမချက်တတ်တဲ့ မိန်းမနဲ့ ရရင်ဖြင့် သူ့သား ခက်ရချည် ရဲ့ ဆိုပြီး။ သူကတော့ သူ့တွက်ကိန်းနဲ့သူ၊ ကျမက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အယောက် သုံး လေးဆယ်စာ ချက်နေတာမို့လို့ သူ မငတ်နိူင်ဘူးလို့ တွေးပြီး သား၊ ယောင်္ကျား တယောက်ကို ကြိုက်ရင် သူ့ရဲ့ အစာအိမ် လမ်းကြောင်းက စဖောက် ရသတဲ့။ အဲဒီ့နည်းနဲ့ ကျမက သူ့ကို စ ပိုးတာ လို့ လူထူပြီ ဆိုရင် သူ အမြဲ ဂုဏ်လုပ် ပြောလေ့ရှိ တယ်။
အိမ်ထောင် ကျကာစ ကဆိုရင် လက်စွမ်းပြလိုက်တာမှ ရုံးကပြန်ရောက်လို့မှ အင်္ကျီ မလဲနိူင်သေးဘူး၊ မီးဖိုချောင် တန်းဝင်တော့ တာ။ ဆီပြန်တခွက်၊ အရွက်ကြော် တမျိုး၊ ဟင်းရည်သောက် တဖုံ၊ အသုတ် တမယ် နဲ့ တနေ့တမျိုး ချက်ကျွေးခဲ့တာ။ သူက လည်း အိမ်ချက်ကို ပိုခုံမင်လာတော့တာပေါ့။
တော်သေပြီ ဒေါ်ဝေကျီ (ကိုဘွိင်းဇ်ဇ်ဇ် နှင့် ကိုဟိုကိုသွား ထံမှ အတုခိုးပါသည်)
at March 02, 2010 34 comments: Links to this post